पर्यटन संग सोशल मीडिया मा एक मूल्य राख्दै Martech Zone
बुधबार, जुलाई 29, 2009 बुधवार, जनवरी,, २०१२ Douglas Karr
प्याट Coyle र म मा महान टीम संग भेट इंडियाना पर्यटन को कार्यालय आज टोली सोशल मिडिया रणनीति अपनाउन को लागी देश मा शीर्ष पर्यटन कार्यालय को रूप मा मान्यता प्राप्त छ - र यो काम गर्दैछ। प्याट र म सेप्टेम्बरमा राज्यभरका 55 XNUMX भन्दा बढी भिजिटोर ब्यूरोसँग कुरा गर्दैछौं र उनीहरूले कसरी सोशल मिडिया अपनाएका छन् भनेर हेर्न टोलीसँग भेट गरे।
इंडियाना अफ टुरिज्म सोशल मिडिया टोली अन्तर्क्रियात्मक उत्पादन प्रबन्धक जेरेमी विलियम्स, निर्देशक एमी वौंन र उत्पादन निर्देशक एमिली म्याथर्ली हुन्।
भर्खर, टोलीले माई इंडियाना समर चलाइरहेको छ - इण्डियाना भ्रमणको सारलाई समेट्ने प्रतिस्पर्धाको साथ इन्डियाना र कम ईन्धनको मूल्यले परिवारलाई धेरै पैसा खर्च नगरी अविश्वसनीय छुट्टी प्रदान गर्दछ।
प्रविष्ट गर्नका लागि तपाईलाई सामेल हुन आवश्यक छ फ्लिकरमा मेरो इण्डियाना समर समूह! १ 1600०० भन्दा बढी फोटोहरू र २०० सदस्यहरूले फोटो पर्यटन गन्तव्यको रूपमा फोटोहरूको अविश्वसनीय मोटेज प्रदान गरेका छन्।
यसको बारेमा सोच्नुहोस् - २०० भन्दा बढी सदस्यहरू र १200०० टच पोइन्टहरू जुन टुरिज्म भिजुअलाइज हुन्छ! अब ती २०० सदस्यहरू र तिनीहरूका विस्तारित नेटवर्कहरू ... दुबै फ्लिकर र पछाडि सोच्नुहोस्। यो एक अविश्वसनीय शक्तिशाली सामाजिक प्रतियोगिता हो। भ्रमण इंडियानाले नोट गरे कि उनीहरू अभियानको कारण साइट ट्राफिकमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ।
माथिको हेड इण्डियाना ब्लगमा हेर्नुहोस् र आफ्नो मनपर्ने फोटोको लागि मतदान गर्नुहोस्!
तपाइँ सोशल मिडियामा कसरी मूल्य राख्नुहुन्छ?
पर्यटन मुद्रीकरण गर्न को लागी मान निर्दिष्ट गर्न गाह्रो इकाई हो। पर्यटन विभागहरूले पैसा खर्च गर्छन्, तर ती खर्चहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुनै राजस्व सम्बन्धित हुँदैन। राजस्व आतिथ्य उद्योग को गन्तव्यहरु द्वारा देखीन्छ ... रिसोर्ट्स, शपिंग, होटल, रेस्टुरेन्ट, आदि। ती सबै स्रोतहरू शायद ही कम राजस्व रिपोर्ट गर्नेछ (वा राजस्व इंगित गर्न सक्छन्) पर्यटन खर्चको श्रेय। हामीलाई थाहा छ लगानीमा फिर्ती छ - तर खर्च ट्र्याक गर्न मुश्किल थियो ... अहिले सम्म!
एउटा तरीका जुन मैले टोलीलाई प्रदान गरें यसको मूल्य हो, यसको सट्टामा, उनीहरूको वेबसाइटहरूमा आएका आगन्तुकहरूमा। भाग्यवस, त्यहाँ एक सम्पूर्ण उद्योग छ जुन वेब पृष्ठ आगन्तुकको मान चिह्नित गर्दछ - र त्यो प्रति क्लिक तलब हो!
त्यहाँ एक उत्तम उपकरण छ Semrush। तपाइँ कुञ्जी शब्द प्रयोग गरेर आगन्तुकहरूको मान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ गुगल एडवर्ड्स किवर्ड उपकरण, तर विस्तृत रिपोर्टिंग मार्फत Semrush यसलाई धेरै सजिलो बनाउन सक्दछ - साथै तपाईंको प्रतिस्पर्धामा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ।
त्यसोभए ... यदि मैले सामाजिक मिडियाबाट प्रति महिना १,००० आगन्तुकहरूको बृद्धि देखेको छु र ती भ्रमणहरू मध्ये एकमा प्रति औसत क्लिक-प्रति-मूल्य $ १.०० प्रति क्लिक मूल्य हो, तब हामी जान्दछौं कि ट्राफिकको मूल्य ually १२,००० हो। अब त्यो मान रिभर्स-ईन्जिनियर गर्न सकिन्छ स्रोतहरू यसलाई बुझ्न यो ट्राफिक प्राप्त गर्न को लागी। के त्यहाँ लगानी फिर्ता भएको थियो? सम्भवतः - तर कम्तिमा यो विधिसँग टोलीले कार्यक्रम सफल भयो कि भएन भनेर केही दृश्य प्राप्त गर्न सक्दछ।
को लागी इंडियाना भ्रमण गर्नुहोस् टोली आक्रामक रूपमा सामाजिक मिडिया रणनीति अपनाउँदै!
टैग: google adwordsindianaप्रति क्लिक भुक्तानी गर्नुहोस्semrushसामाजिक संजालपर्यटनइन्डियाना भ्रमण गर्नुहोस्
जुलाई,, २०१ at 30::2009। बिहान
धेरै राम्रो ब्लग। थप राज्यहरूले यो गर्नुपर्छ। नगरले गर्नु पर्छ !
मैले Auburn संग्रहालय देखेको छैन, तर म केवल एक दुई पृष्ठ फिर्ता गएँ।
नयाँ अल्बानीमा राम्रो सामानहरू पनि उनीहरूलाई कभर गर्न आवश्यक छ।
अगस्ट 14, 2009 मा 3: 52 AM
महान अवलोकन। मैले भर्खरै सामाजिक सञ्जाल / पर्यटनको लागि सामाजिक सञ्जालको लागि नि: शुल्क गाइड जारी गरेको छु। पर्यटनको लागि सामाजिक सञ्जालको मूल्य भनेको सम्बन्ध र विश्वास स्थापित हुनु हो।